कोरोना भाइरसबाट विश्वमा ५ लाख १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु – iNews16
कोरोना भाइरसबाट विश्वमा ५ लाख १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
१७ असार, जेनेभा ।
अफ्रिकामा चार लाख आठ हजार ३०० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रहेको छ भने १० हजार १९५ जनाको मृत्यु भएको छ । ओसियानामा नाै हजार ५६० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रहेको छ भने १२६ जनाको मृत्यु भएको छ ।रासस / एएफपी
Previous होस गर्नुहोस् ! पैसाबाट कोरोना सर्छ
Next अन्तिम संस्कार हुनै लाग्दा आमा रोएको सुनेर ब्युँझिए किरन, घाटबाट फिर्ता गरि अस्पतालमा लागि उपचारपछि किरनले मान्छे चिन्न र कुरा गर्न सक्ने भए !
अब १ रुपैयामा नै बाईक वा स्कुटर रोजेर किन्नुहोस् !
युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? जानी राखौ
मेहन्दी लगाएर ब्रोइलर कुखुरालाई लोकल बनाएर बिक्री ग’र्ने ४ जना काठमाडौँबाट प,क्राउ